के प्रकृतिको लागि तपाईँ कोरोना बन्न चाहनुहुन्छ? - खबरम्यागजिन
[ May 25, 2021 ] के हो त ब्ल्याक फङ्गस(Black fungus)? Breaking News
Homeमुख्य समाचारके प्रकृतिको लागि तपाईँ कोरोना बन्न चाहनुहुन्छ?
के प्रकृतिको लागि तपाईँ कोरोना बन्न चाहनुहुन्छ?
May 7, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
अझ पनि चेत नखुले रुखपात नष्ट बन्नेछ, हावा बनिने कारखाना नै बन्द हुनेछ। के त्यसबेला कोरोनाभन्दा ठूलो सङ्कट आउने छैन त? कोरोना आउन अघि हामीले प्रकृकिलाई सम्मान गर्न जानेनौं किन भने हामीसित ज्ञान थिएन। कोरोनाले त्यो ज्ञान हामीलाई दियो। अब त प्रकृतिलाई सम्मान गरौं, माया गरौं र भोलिको भविष्य सुरक्षित गरौं। के तपाईँलाई कोरोना लागेको मनपर्छ? पर्दैन भने के प्रकृतिको लागि तपाईँ कोरोना बन्न चाहनुहुन्छ?कोरोनाकालपछिका मानिसहरूको निम्ति प्रकृतिले यही प्रश्न छोडेको छ।
यतिखेर विश्वलाई नै कोरोनाले आफ्नो मुट्ठीमा लिएको छ। हरेक क्षेत्र अहिले सुनसान छ। मानिसहरूले जीवनलाई योभन्दा अघि यत्तिको माया कहिले गरेका थिएनन्। यतिखेर डाक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मी, सुरक्षाकर्मी अघिल्लो पङ्तीमा बसेर सेवा गरिरहेका छन्। कोसिस गरिरहेका छन् कि सबै नागरिक घरभित्रै बसुन्। आफू सुरक्षित रहुन् अनि अरूलाई पनि सुरक्षित राखुन्। बाँचुन्। कोही नमरुन्।
सरकार, जनता सबै महामारी रोकथामको लागि लडिरहेको छ। सबै पक्षबाट कोसिस जारी छ।
कोरोनाले क्षति पुऱ्याएको छ भने त्यो केवल मानिसलाई मात्र हो। हरेक देशको अर्थनिति डावाँडोल पारेको छ। गरीब गुर्बालाई चपेटमा पारेको छ। व्यापार नष्ट छ। सङ्कट चुलिएको छ। महामारी बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्न जस्तै हानी नोक्सानी पनि सहेर सबै लडिरहेका छन्। यो नराम्रो पक्ष हो। तर मानिस सङ्घर्षशील प्राणी हुन्। सङ्घर्ष गर्नैपर्छ। अहिलेको कर्तव्य नै सङ्घर्ष हो।
तर, प्रकृतिलाई भने यो महामारीले अलिकतिपनि क्षति पुऱ्याएको छैन। प्रकृतिको लागि त मानिस नै कोरोना हुन्। प्रकृतिलाई मानिसले मात्र क्षति पुऱ्याउँछ। मानिसहरू सङ्कटसित लड्दैगर्दा प्रकृतिले भने राहत पाएको छ।
अहिले गाडीहरु खचाखच छैनन्। न चर्को हर्न छ, न घ्यारघुर। कुनै कारखानाबाट धुँवा उडेको छैन। कुनै खोला प्रदूषित छैन। फाटेको ओजन तह आफै जोडिँदैछ। हरियाली छाएको छ। न ध्वनि, न वायु, कतै प्रदुषण छैन।
प्रदुषणयुक्त शहरमा अहिले स्वच्छ हावा बग्दैछ। प्रकृति अहिले आफ्नो स्वरुपमा फर्किएको छ। पक्का हो, मानिस आफ्नो स्वरुपमा फर्किएपछि प्रकृतिमाथि दोहन शुरु होला, जो भइरहेकै थियो।
अचम्म छ, प्रकृतिको सुन्दरता मिचेर कमाएको पैसा काम नलाग्ने स्थिति आएको छ। यस्तो लाग्छ, यो प्रकृतिले मानिसमा लिइरहेको बदला हो। वा त कोरोनाकालको सबैभन्दा मिठो पाठ।
गङ्गालाई एउटा पवित्र नदी मानिन्थ्यो। तर पवित्र नदीमा लेदो बग्थ्यो। नदी स्वच्छ थिएन। मैला नदीलाई पवित्र मानिन्थ्यो। पवित्र नदी कस्तो हुन्छ? त्यसको उत्तर प्रकृतिले कोरोनाकालमा अहिले मानिसलाई दिएको छ।
यसो त कोरोना डरलाग्दो भाइरस हो, त्यो त महामारीले मानिसलाई बतायो। तर प्रकृतिको लागि त मानिस नै कोरोनाभन्दा डरलाग्दो भाइरस थियो। किन भने प्रकृतिमा हरदम मानिसको कारण महामारी थियो। तर मानिसले देखेन। मानिस कति स्वार्थी भन्ने कुरा पनि कोरोनाले नै बताइदियो। मानिस, आफूलाई पर्दा मात्र महामारीको अर्थ बुझिरहेको छ। प्रकृतिमा हरदम रहेको महामारी मानिसले कहिल्यै देखेन।
अहिले मानिसहरू भाइरसयुक्त छन्, नदीहरू, हावा, प्रकृति भाइरसमुक्त। साँच्चै नदीहरू अहिले पवित्र बनेका छन्। मानिसको निम्ति कोरोना खतरनाक भए पनि प्रकृतिको निम्ति कोरोना भगवानजस्तो बनेको छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कोरोनाको महामारी सँधै रहँदैन किन भने मानिस लड्न सक्छ। लड्छ पनि र एकदिन यो महामारी हटेर जानेछ। तर प्रकृति मानिससित लड्दैन। प्रकृतिले मानिसलाई विझाउँदैन। किन भने मानिस प्रकृतिको लागि कोरोना झैं हो।
कोरोनाले प्रकृति र मानिसलाई जुन शिक्षा दिएको छ, त्यसलाई कोरोनाकालपछि मानिसले मनमा लिएर हिँड्छ होला?
यस्तो लाग्छ, प्रकृतिमाथि अत्याधिक दोहन भएपछि नै प्रकृतिले त्यसलाई रोक्न कोरोना बन्न पऱ्यो। होइन भन्ने आधार पनि छैन।
कोरोनाकालपछि मानिस फेरि प्रकृतिको लागि कोरोना बन्ने त होइनन्? यदि त्यसो भयो भने मानिसले आफ्नो मृत्यु आफै बोलाउनेछन् र यति सुन्दर प्रकृति गुमाउने छन्। पृथ्वी गुमाउनेछन्।
यसैले सबैले कोरोनाअघिको जुन संसार थियो, त्यसलाई कोरोनाकालपछि अर्कै बनाऔं। प्रकृतिसित खेलवाड गर्न छोडौं।
बुझौं, यो कोरोनाले मानिसलाई भय मात्र नदिएर ठूलो पाठ पनि सिकाएको छ। मानिसले प्रकृतिसित खेलवाड गर्दा कस्तो परिणति भोग्नुपर्छ भन्ने चेत खुलाएको छ। कोरोनाले पानीलाई असर पारेन, हावालाई पारेन, रुखपातलाई पारेन, तर मानिसले नै पानी, हावालाई प्रदुषित गरेर रुखपात नष्ट गरेर विपत्ति निम्त्यायौं।
कोरोना लाग्दा हामीलाई जसरी डर लाग्यो, के कहिल्यै सोच्नु भयो त्यो डरको कारण म आफै हुँ। त्यो डर आफैले निम्त्याएको हुँ। अझ पनि चेत नखुले भोलि हामीले फेरिरहेको सास नै प्रदुषित हुनेछ। त्यतिबेला फेर्से सास कहाँ किन्ने?
अझ पनि चेत नखुले रुखपात नष्ट बन्नेछ, हावा बनिने कारखाना नै बन्द हुनेछ। के त्यसबेला कोरोनाभन्दा ठूलो सङ्कट आउने छैन त?
कोरोना आउन अघि हामीले प्रकृकिलाई सम्मान गर्न जानेनौं किन भने हामीसित ज्ञान थिएन। कोरोनाले त्यो ज्ञान हामीलाई दियो। अब त प्रकृतिलाई सम्मान गरौं, माया गरौं र भोलिको भविष्य सुरक्षित गरौं।
के तपाईँलाई कोरोना लागेको मनपर्छ? पर्दैन भने के प्रकृतिको लागि तपाईँ कोरोना बन्न चाहनुहुन्छ?
कोरोनाकालपछिका मानिसहरूको निम्ति प्रकृतिले यही प्रश्न छोडेको छ।
के हो त ब्ल्याक फङ्गस(Black fungus)? May 25, 2021
बङ्गालमा आएका अन्तर-मन्त्रालयी केन्द्रीय टिमसित संलग्न6जवान सङ्क्रमित
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (39,877)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (35,260)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (32,376)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (30,209)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (26,820)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (24,152)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (23,086)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (22,447)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (21,958)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (21,506)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (21,362)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (20,969)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (20,256)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (20,194)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (20,062)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (19,667)